Risotto miaraka amina hazavana sy salmon mifoka vita amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
Risotto miaraka amina honko sy salmona mifoka
-BARY40 minitraOlona 4440 kaloria
Androany isika dia hanao risotto miaraka amina boka marobe sy ny fikasihana manokana izay manome foana salmon nifoka amin'ny takelaka misy anay.
Hanomana karazana crèères leek. Mba hanaovana izany dia mila tapaina ianao, endasina ary andrahoy amin'ny ronono kely.
Avy eo isika dia tsy maintsy manandrana ny vary, manandrana azy Divay fotsy, mahandro azy ary dibera azy.
Rehefa manao a risotto amin'ny Thermomix Zava-dehibe ny hoe, rehefa ampidirintsika ny rano na ny ron-kena, dia afangaro tsara ny vary, alaivo daholo izay rehetra eo am-pototry ny vera, mba tsy hijanona ho akaiky ny vary. Azonao atao ny mahita ity dingana ity sy ireo hafa rehetra ao amin'ny resipeo horonantsary izay nomaninay ho anao.
1 Ravina sy salmon risotto mifoka
Ravina sy salmon risotto mifoka
Manome menaka menaka fanampiny azy ny boka.
200 g ny tsirony
320 g ny vary ho an'ny risotto (Carnaroli, Arborio ...)
Salmon mifoka 100 g amin'ny tsipika
Dibera 10-20 g
Voasary kely sakamalaho
Sakafo vaovao (tsy voatery)
Apetrakay ao anaty vera sy ao anaty vera ary programa ilay boka 8 segondra, hafainganam-pandeha 5. Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera.
Ampio ny menaka oliva sy ny programa 5 minitra, 120º, hafainganana 1.
Ampidirinay ny ronono sy ny programa 2 minitra, 90º, hafainganana 1.
Izahay izao dia manampy ny vary ary, tsy mametraka ilay bikam-borona dia manao fandaharana 3 minitra, 120º, fihodinana havia, hafainganana 1.
Napetrakay ny divay fotsy ary, tsy nametaka vera intsony izahay, nandamina fandaharana 1 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1.
Ampianay ny rano sy ny sira. Afangaro tsara amin'ny spatula, ahatratra tsara ny fanambanin'ny vera mba hampiakarana ny vary rehetra.
Apetrakay eo amin'ny toeran'ny kaopy sy programa ilay harona 10 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1.
Apetrakay ny salmon ary tohizantsika amin'ny fandrahoana sakafo, fandaharana ankehitriny eo anelanelan'ny 2 sy 4 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1.
Navelanay hipetraka tao anaty vera nandritra ny iray minitra ny varinay.
Arotsaka ny dibera sy poivre kely narotsaka. Afangaro tsara ary arosoy avy hatrany miaraka amina chives vaovao.
Ny tsara indrindra dia ampiasao vary risotto manokana miaraka amin'ny fotoana fandrahoan-tsakafo 14 minitra. Raha toa ka mila fotoana bebe kokoa na latsaka ny varika, dia tsy maintsy manova ny minitra naroso ao amin'ny fizarana faha-8 amin'ny resinay izahay. Soso-kevitra: tsara kokoa ny manao programa tsy dia manisy fotoana ary manampy minitra vitsy raha tsy masaka tsara ny vary.
Fanazavana fanampiny - Saosisy amin'ny divay fotsy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Risotto miaraka amina honko sy salmona mifoka
Tombana vary misy voaloboka
Lasopy salady miaraka amin'ny Thermomix